Lixabiso Elungiselelweyo sheet metal iindawo iindawo ukuwelda mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Inkqubo yesinyithi ebandakanya ukuwelda. Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa i-welding yombane kunye ne-welding yegesi, kunye ne-laser welding, i-brazing, i-welding ye-thermal, i-electron beam welding, i-welding e-explosive, njl njl njl njl njl njl.
Elungiselelweyo sheet intsimbi iwelding iindawo-ngqo sheet ubhedu sheet sentsimbi ukuqhubekekisa iindawo oomatshini
Sihlala kuyo yonke indawo. Amalungu ephepha lesinyithi ahlukaniswanga kumacandelo esinyithi esinyithi ngokubhijela amandla ombane, ukusika kwe-laser, ukusetyenzwa okunzima, ukubopha isinyithi, ukuzoba isinyithi, ukusika iplasma, ukuwelda ngokuchanekileyo, ukwenza umqulu, ukugoba isinyithi, ukugoba, ukusika i-jet yamanzi, okwenziwe ngokuchanekileyo ukuwelda. Isinyithi sephepha lichazwa njenge: iphepha lesinyithi yinkqubo ebandayo yokusebenza kwamashiti esinyithi (ihlala ingezantsi kwe-6mm), kubandakanya ukucheba, ukubetha / ukusika / ukudibanisa, ukusonga, iwelding, i-riveting, ukusika kunye nokwenza (njengemizimba yemoto). Inqaku elibonakalayo kukuqina okufanayo kwenxalenye efanayo. Iimveliso zeshidi zephepha zinempawu zobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ukuqhuba kombane, iindleko eziphantsi kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso. Banoluhlu olubanzi lokusetyenziswa. Ukulungiswa kwesinyithi esisetyenzisiweyo kuye kwasetyenziswa ngokubanzi kwicandelo le-elektroniki, unxibelelwano, ishishini leemoto, kunye nezixhobo zonyango. Umzekelo, kwiimeko zekhompyuter, iifowuni eziphathwayo, kunye neMP3, isinyithi siyinxalenye ebaluleke kakhulu. Ukongeza, isetyenziswa ekwenziweni kwezixhobo zonyango, kwaye ikwasetyenziswa kwimoto nakwilori (kwilori) kwimizimba, iinqwelomoya kunye namaphiko, iitafile zonyango, uphahla lokwakha (ulwakhiwo) nezinye izinto ezininzi.
Izinto eziluncedo ze Shanghai Ouzhan sheet metal iwelding iindawo esizisebenzelayo
-Inokuyibona indibaniselwano eguqukayo yoomatshini bokuhlukumeza abaninzi, kunye nokulayishwa okuzenzekelayo kunye nokothula kunye nokusebenza ngokubambelela ngeedigri ezininzi zenkululeko kunokuhlangabezana neemfuno zeenkqubo ezinzima zemveliso;
-Inokuxhotyiswa ngovavanyo lokubonwayo lweCCDD ukuze iqonde ukubanjwa simahla kwemisebenzi eyinkimbinkimbi;
-Iyakwazi ukuqonda ukuveliswa kobunzima obuqhubekayo bomsebenzi omnye, kwaye inokuqonda imveliso yokuguqula ngokuzenzekelayo yeentlobo ezininzi kunye neebhetshi ezincinci;
Ukulungelelanisa okuphezulu, ukufezekisa unxibelelwano nezinye izixhobo ezinje ngezixhobo zomatshini ze-CNC, i-PLC, iisenzi zangaphandle, kunye nokufezekisa ulawulo lokulandelelana olukhuselekileyo noluthembekileyo.
-Ukungqinelani: ukusebenza ngokuchaseneyo nokungqubana, ukuhlolwa kwemveliso, i-axis yangaphandle, ukuthambisa kunye neminye imisebenzi yokuzikhethela;
-Iintambo zemveliso ezenzekelayo ezizenzekelayo ezikwi-intanethi kunye nolwakhiwo lwefektri "yedijithali" inokufezekiseka ngokulula, ukugcina amandla kunye nokuphucula umfanekiso wobugcisa kwimveliso yefektri.
Elungiselelweyo iphepha lobhedu iinxalenye umatshini iwelding metal
Izinto eziphathekayo Ingqele eqengqelekayo iphepha, iphepha kwalenza, intsimbi engatyiwa, i-aluminiyam emsulwa kunye ne-aluminium ingxubevange, ubhedu olunyulu nobhedu ingxubevange, intsimbi technology umphezulu processing technology
Unyango oluphezulu Ngokutsho kweempawu zezinto ezisetyenzisiweyo kunye neemfuno zabathengi, unyango lomphezulu lwenziwa ukufezekisa iziphumo ezintle nezomeleleyo.
Inkqubo ephambili Ukulungiswa kwe-Welding Sheet
Egqithileyo Sheet iindawo metal welding
Okulandelayo: Amacandelo obhedu e-CNC